War Deg Deg Ah Lafta Gareen oo lacag ku bixiyay in la dacaayadeeyo Mukhtaar Roobow – idalenews.com
Baydhabo (Idaale news Online)- Cabdicasiis Lafta Gareen oo ah musharaxa ay Dowlada dhexe taageereyso ee loo wado inuu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa lagu soo waramaya inuu qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida lacag ku siiyay in la dacayadeeyo Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Roobow ayaa noqday dooqa koowaad ee Digil iyo Mirifle halka uu Lafta Gareen yahay dooqa koowaad ee Kheyre iyo Farmaajo oo aan labaduba waxba ka quseyinin mustaqbalka iyo aayaha Koonfur Galbeed.
Labada nin , mid waa mid dadkiisu rabaan midna waa mid la rabo in dadkiisa lagu qabsado ,waxaana markii uu farqigaan soo baxay oo ay Digil iyo Mirifle meel walba ka banaanbaxeen iyagoo dalbanaya in Roobow la doorto ayuu Lafta Gareen bilaabay inuu saxaafada isticmaalo.
Kooxda ololaha ee Lafta Gareen ayaa dhowr website lacag siiyay waxaana ay kula heshiiyeen in asbuucii la daabaco 3 ilaa 4 sheeko oo la isku dayayo in dadka lagu nacsiiyo Roobow. Inkastoo waayaha Roobow ay ku jiraan qeybo kala duwan hadana waxaa uu hada muuqda midka ugu badan oo ay dadku rabaan.
Sabab ?, jawaabta weydii dadka kasoo jeeda Koonfur Galbeed.
Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa dareemaya cabsi badan oo ku saabsan Roobow , waana mida ku qasabtay inuu saxaafada u adeegsado in Roobow la magac dilo si ay shacabku u nacaan.
Mid ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa u sheegay Ididaalews Online iney ogyihiin in Roobow uu yahay qofka qura ee wax u qaban kara deegaanka ayna codkooda siin doonaan, laakiin wuxuu yiri “Ma diidi doono lacagta Kheyre noo soo dhiibay”.
Waaxda ololaha ee Mukhtaar Roobow ayaan wali ku baraarugin dagaalka Lafta Gareen iyo kalsooni darada heysata.